Gucci ကျဆုံးခြင်း / ဆောင်းရာသီ 2017-2018 မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး | စတိုင်လ်အမျိုးသားများ
Alessandro Michele ဟာတီထွင်ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာလမ်းညွှန်မှုကိုရောက်ရှိလာကတည်းက Gucci ၏ကြော်ငြာစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများသည် ၄ ​​င်းတို့၏နာမည်ကောင်းဒီဇိုင်းများနှင့်အညီနေထိုင်ရန်ရုန်းကန်နေရသည်.
၎င်းသည်လွယ်ကူသောအလုပ်မဟုတ်သော်လည်း၎င်းတို့ကိုမထားခဲ့ရန်စီမံထားသည်။ ဆောင်း ဦး ရာသီ / ဆောင်းရာသီ 2017-2018 နှင့်သက်ဆိုင်သောအကြောင်းအရာ၏အဓိကအကြောင်းအရာမှာခေါင်းစဉ်ဖြစ်သည် ဟောင်းကျောင်းကသိပ္ပံဝတ္ထုရုပ်ရှင်နှင့်စီးရီးStar Trek ကဲ့သို့
Michele ၏ဒီဇိုင်းများနှင့်ဓာတ်ပုံနှင့်ဗွီဒီယိုများအားဖမ်းယူနိုင်ခြင်းကိုပြသခဲ့ပြီးဖက်ရှင်ဓာတ်ပုံဆရာနှင့်ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးသူ Glen Luchford သည်ယခင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်အတိုင်းဤစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်လှုပ်ရှားမှုအသစ်အတွက်တစ်ဖန်တာဝန်ရှိသည်မှာအံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။
ဤအခါသမယတွင် Gucci ကလေးတွေဟာ el ည့်သည်တွေကိုဂြိုလ်သားတွေနဲ့အတူတူမျှဝေကြတယ်ကြောင်များ၊ ဒိုင်နိုဆောများနှင့် 'Black Lagoon from Creature' ရုပ်ရှင်မှနဂါးပင်။
၎င်းသည်အနာဂတ်နှင့်အတိတ်နှစ်မျိုးလုံးမှလှုံ့ဆော်မှုကိုခံယူနိုင်သောကြောင့် (မတူကွဲပြားသောဒြပ်ပေါင်းများကိုပေါင်းစပ်။ မကြာခဏပေါင်းစပ်ပြီးဖြစ်သော်လည်းအံ့ဖွယ်နည်းဖြင့်၎င်းတို့သည်အလုပ်လုပ်ပြီးအဓိပ္ပာယ်ရှိသည်) ဤ retro-futuristic setting သည်သင့်အတွက် Michele စတိုင်လ်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်.
ဆောင်းရာသီ / ဆောင်းရာသီ 2017-2018 သည်ကျား၊ မမရွေးစုဆောင်းမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့တွင်တောက်ပသော၊ အရှေ့တိုင်း motif များ၊ အားလုံးကိုယ်စားပြုသောသာယာသောအာရုံနှင့်အတူရေချိုး ရှေးခေတ်ကအလှပြင်ဆရာတစ် ဦး နှင့်အကျပ်အတည်းအကျဆုံးအကျဆုံးနိယာမကို ဖြတ်၍ ကြည့်ပါ.
Fanny အထုပ်များနှင့်လေးကိုဆက်ဆံမှုအဓိက feature ပါ ဒီသာမန်ထက်ပိုသောစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးတွင်၊ လူတစ်ယောက်နှင့်ဂြိုလ်သားတစ် ဦး အကြားဆက်သွယ်မှုနှင့်အချစ်ဇာတ်လမ်းတစ်ခုကိုပင်တွေ့နိုင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတိုင်လ်အမျိုးသားများ » ပုံ » Gucci သည်၎င်း၏ကင်ပိန်းအသစ်အတွက် retro-space ခရီးစဉ်ကိုပြုလုပ်သည်
နွေရာသီ 2017 ခုနှစ်တွင်ဖက်ရှင်နေကာမျက်မှန်